ABagwebi 14 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
14 Waza uSamson wehla waya eTimna,+ wabona umfazi eTimna ezintombini zamaFilisti. 2 Ngoko wenyuka waza waxelela uyise nonina esithi: “Kukho umfazi endimbonileyo eTimna ezintombini zamaFilisti, kwaye ke ndithabatheleni yena njengomfazi.”+ 3 Kodwa uyise nonina bathi kuye: “Akukho mfazi na phakathi kweentombi zabazalwana bakho naphakathi kwabo bonke abantu bakowethu,+ ukuba uye kuthabatha umfazi kumaFilisti angalukanga?”+ Sekunjalo uSamson wathi kuyise: “Ndithabathele nje yena, ngenxa yokuba nguye kanye olungileyo emehlweni am.” 4 Ke yena uyise nonina, babengazi ukuba oko kwakuvela kuYehova,+ ukuba wayefuna ithuba nxamnye namaFilisti, njengoko ngelo xesha amaFilisti ayelawula uSirayeli.+ 5 Ngako oko uSamson wehla noyise nonina baya eTimna.+ Akufika kwizidiliya zaseTimna, kaloku, khangela! nantso ingonyama entsha enesingci igquma ize kumhlangabeza. 6 Waza umoya kaYehova wasebenza kuye,+ ukuze ayiqwenge kubini, kanye njengoko ubani eqwenga itakane eliyinkunzi kubini, kwaye kwakungekho nto konke konke esandleni sakhe. Akazange amxelele uyise okanye unina into ayenzileyo. 7 Waqhubeka nendlela yakhe waza wathetha nomfazi lowo; yaye wayesalungile emehlweni kaSamson.+ 8 Ke kaloku emva kwethuba wabuyela kuye ukuze amthabathe amse ekhaya.+ Ngelo xesha waphambuka waya kukhangela isidumbu sengonyama, kwaye apho kwakukho ibubu leenyosi kwisidumbu sengonyama, nobusi.+ 9 Ngoko wabukhothululela kwiintendezakhe waza waqhubeka nohambo, esidla njengoko wayehamba.+ Akuhlangana kwakhona noyise nonina, kwaoko wabanika obuthile, badla. Akabaxelelanga ukuba ubusi wayebukhothulule kwisidumbu sengonyama. 10 Kwaye uyise waqhubeka nendlela yakhe esihla esiya emfazini, yaye uSamson wenza isidlo apho;+ kuba leyo yayiyindlela ababesenza ngayo abafo abaselula. 11 Yaye kwathi, ekumboneni kwabo, ngoko nangoko bathabatha abakhaphi bomyeni abangamashumi amathathu, ukuze bamgcine. 12 Waza uSamson wathi kubo: “Makhe ndivakaliseiqhina kuni.+ Ukuba niye nandixelela lona ngezi ntsuku zisixhenxe+ zesidlo nize nilicombulule, ndiya kuninika izambatho zangaphantsi ezingamashumi amathathu nezinxibo ezingamashumi amathathu.+ 13 Kodwa ukuba anikwazi kundixelela, nini eniya kundinika izambatho zangaphantsi ezingamashumi amathathu nezinxibo ezingamashumi amathathu.” Bathi kuye: “Livakalise iqhina lakho, masilive.” 14 Ngoko wathi kubo: “Kodlayo+ kwaphuma into edliwayo,Kowomeleleyo kwaphuma into emnandi.”+ Yaye abazange bakwazi ukulixela iqhina iintsuku ezintathu. 15 Yaye kwathi ngosuku lwesine bathi kumfazi kaSamson: “Qhatha indoda yakho ukuze isixelele iqhina.+ Kungenjalo siya kukutshisa wena nendlu kayihlo ngomlilo.+ Nisimemele apha ukuze nithabathe izinto esinazo+ na?” 16 Ngenxa yoko umfazi kaSamson waqalisa ukumlilela+ waza wathi: “Undithiyile, ewe, akundithandi.+ Uvakalise iqhina koonyana babantu bakowethu,+ kodwa mna akundixelelanga.” Waza wathi kuye: “Kaloku, ubawo nomama andibaxelelanga,+ kwaye ndifanele ndixelele wena na?” 17 Kodwa waqhubeka emlilela iintsuku ezisixhenxe njengoko kwakuqhubeka isidlo sabo, yaye kwathi ekugqibeleni ngosuku lwesixhenxe wamxelela, ngenxa yokuba wayemxinile.+ Wandula ke yena walixelela oonyana babantu bakowabo.+ 18 Ngoko amadoda esixeko athi kuye ngosuku lwesixhenxe ngaphambi kokuba aye kwigumbi langaphakathi:+ “Yintoni na emnandi ngakumbi kunobusi,Yaye yintoni na enamandla ngakumbi kunengonyama?”+ Wathi kubo:“Ukuba beningalimanga ngethokazi lam lenkomo,+Ngeningalicombululanga iqhina lam.”+ 19 Kwaye umoya kaYehova wasebenza kuye,+ ukuze ehle aye eAshkelon,+ waxabela amadoda angamashumi amathathu awo waza wathabatha oko wayewahlube kona waya kunika abo babexele iqhina izinxibo.+ Yaye waqhubeka uvutha umsindo wakhe, waza wenyuka waya endlwini kayise. 20 Kwaye umfazi kaSamson+ waba ngowomkhaphi+ wakhe awayenxulumene naye.